မင်းသား Louis Koo ရဲ့ လေးစားဖွယ်လုပ်ရပ်တစ်ခု - The Lifestyle Myanmar
Home Entertainment လူတွေမသိသေးတဲ့ Line Walker မင်းသား Louis Koo ရဲ့ လေးစားဖွယ်လုပ်ရပ်တစ်ခု
လူတွေမသိသေးတဲ့ Line Walker မင်းသား Louis Koo ရဲ့ လေးစားဖွယ်လုပ်ရပ်တစ်ခု
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က Line walker2ရုံတင်နေလို့ သွားကြည့်တာ…. မြန်မာပြည်ကို ရိုက်ထားတာ လှလိုက်တာလို့ဆိုပြီး တင်ထားတာ တွေ့လို့ ကျွန်မလည်း ကျွန်မသိတာလေးတစ်ခု ပြောပြချင်တယ်။
ရုပ်ရှင်အကြောင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး… ကျွန်မမှ မကြည့်ရသေးတာ အဲဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ မင်းသား Louis Koo အကြောင်း နည်းနည်းပြောပြချင်တာ…။
သူက ဟောင်ကောင်နာမည်ကြီး မင်းသားထဲကတစ်ယောက်ဆိုတာ အများသိပြီးသားပါ။ သူလည်း ပေါတောတောကားတချို့ ရိုက်ဖူးပါတယ်၊ ဝေဖန်ခံရဖူးပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူက ပေါကားဆိုပေမယ့် ထိုက်တန်တဲ့ အခကြေးငွေပေးရင် ရိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက အလှူအတန်း အရမ်းလုပ်သူပါ။ ဒါပေမဲ့ သူလှူနေတယ်ဆိုတာကို ဘယ်မီဒီယာကမှ မသိပါဘူး။
နောက်ပိုင်းမှာ သိသွားရတာကလည်း အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ သူ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ထုတ်ဖော်ပြောလိုက်လို့ လူတွေသိကုန်ုကြတာ။
တရုတ်ပြည် ဆင်းရဲတဲ့ဒေသတွေမှာ သူလှူထားတဲ့ စာသင်ကျောင်းပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ။ အရင်တုန်းက အဲဒီကျောင်းတွေကို သူလှူပါတယ်လို့တောင် ကျောင်းက ဆရာ၊ ဆရာမတွေ၊ တာဝန်ရှိသူတွေ မသိပါဘူး။ ဝေးခေါင်တဲ့နေရာမို့ တချို့ကျောင်းသားဆို သူ့နာမည်တောင် မကြားဖူးပါဘူး… တဲ့..။
တချို့လှူဒါန်းမှုက လူသိစရာမလို … ကိုယ့်ရင်ထဲ ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေရုံလေးသာ…
Line Walker2Trailer ကြည့်ရန်
ရေးသားသူ – နိုင်းနိုင်းစနေ
သူငယျခငျြးတဈယောကျက Line walker2ရုံတငျနလေို့ သှားကွညျ့တာ…. မွနျမာပွညျကို ရိုကျထားတာ လှလိုကျတာလို့ဆိုပွီး တငျထားတာ တှလေို့ ကြှနျမလညျး ကြှနျမသိတာလေးတဈခု ပွောပွခငျြတယျ။
ရုပျရှငျအကွောငျးတော့ မဟုတျပါဘူး… ကြှနျမမှ မကွညျ့ရသေးတာ အဲဒီရုပျရှငျထဲမှာပါတဲ့ မငျးသား Louis Koo အကွောငျး နညျးနညျးပွောပွခငျြတာ…။
သူက ဟောငျကောငျနာမညျကွီး မငျးသားထဲကတဈယောကျဆိုတာ အမြားသိပွီးသားပါ။ သူလညျး ပေါတောတောကားတခြို့ ရိုကျဖူးပါတယျ၊ ဝဖေနျခံရဖူးပါတယျ၊ ဒါပမေဲ့ သူက ပေါကားဆိုပမေယျ့ ထိုကျတနျတဲ့ အခကွေးငှပေေးရငျ ရိုကျတယျလို့ ပွောပါတယျ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက အလှူအတနျး အရမျးလုပျသူပါ။ ဒါပမေဲ့ သူလှူနတေယျဆိုတာကို ဘယျမီဒီယာကမှ မသိပါဘူး။
နောကျပိုငျးမှာ သိသှားရတာကလညျး အစီအစဉျတဈခုမှာ သူ့မိတျဆှတေဈယောကျက ထုတျဖျောပွောလိုကျလို့ လူတှသေိကုနျုကွတာ။
တရုတျပွညျ ဆငျးရဲတဲ့ဒသေတှမှော သူလှူထားတဲ့ စာသငျကြောငျးပေါငျး ၁ဝဝ ကြျောရှိခဲ့ပါပွီ။ အရငျတုနျးက အဲဒီကြောငျးတှကေို သူလှူပါတယျလို့တောငျ ကြောငျးက ဆရာ၊ ဆရာမတှေ၊ တာဝနျရှိသူတှေ မသိပါဘူး။ ဝေးခေါငျတဲ့နရောမို့ တခြို့ကြောငျးသားဆို သူ့နာမညျတောငျ မကွားဖူးပါဘူး… တဲ့..။
တခြို့လှူဒါနျးမှုက လူသိစရာမလို … ကိုယျ့ရငျထဲ ကနြေပျပီတိဖွဈနရေုံလေးသာ…
Line Walker2ရုပျရှငျဇာတျကားကိုတော့ သွဂုတျလ (၈) ရကျနေ့ တရုတျနိုငျငံမှာ စတငျရုံတငျသှားမှာဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး လာရောကျပွသမယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မွနျမာအငှအေ့သကျတှေ လှမျးခွုံနတေဲ့ Line Walker2ရဲ့ Trailer ကို ဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။
မင်းသား Louis Koo ရဲ့ လေးစားဖွယ်လုပ်ရပ်တစ်ခု
Previous articleLine Walker−2 ရဲ့ အတုယူစရာအချက်များ ပြောကြားရင်း မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေက ဆင်းရဲနုံချာတယ်ဟု ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်ပြော
Next articleစနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေနဲ့တိုက်နေတဲ့ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်တိုင်ပိတ်ရက်တွေအတွက် အစားထိုးပေးမည်